15 things you should carry in your bag. 🎒 – YANGON STYLE
15 things you should carry in your bag. 🎒
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ အပြင်သွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပစ္စည်းတွေအများကြီး အိတ်ထဲထည့်သွားတတ်ကြပေမဲ့ သိပ်အသုံးမဝင်ပဲ သယ်ရလေးတာပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်အတွက်အလိုအပ်ဆုံးအရာတွေကိုသာ ထည့်ထားသင့်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေမတူညီကြပေမဲ့ အများစုအတွက်လိုအပ်နိုင်မဲ့ ပစ္စည်း ၁၅ မျိုးကိုပြောပြချင်ပါတယ်။
Phone ကတော့ လူတိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ခုခေတ်မှာ phone သာ ပါမလာရင် အဆက်အသွယ်ခေတ္တပျက်သလို တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
2. စာအုပ်/ ခဲသားဘောပင်
လမ်းသွားရင်းပဲဖြစ်ဖြစ် အကြံဉာဏ်ကောင်းလေးတစ်ခုခုရရင် ချမှတ်ရေးဖို့အတွက် အိတ်ထဲမပါမဖြစ် အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ် diary, schedule အစရှိတဲ့ တစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလဲ အလွယ်တစ်ကူမှတ်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ဘောပင်ထက် ခဲသားဘောပင်ကို ပိုပြီး recommend ပေးချင်ပါတယ်။ ဘောပင်ဆိုရင် မင်တွေလက်မှာပေကျံနိုင်သလို မင်ဖျက်ရတာလဲ သိပ်မလွယ်ကူလို့ ခဲသားဘောပင်ကပိုအဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ကိုယ်ပေါ့နော်။ 🥰
3. Tissue (or) wipes
ဒါကတော့ မုန့်စားပြီးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုညစ်ပေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အလွယ်တကူသန့်စင်ပေးနိုင်တာမို့ အိတ်ထဲထည့်ထားသင့်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ Wipes တွေဆိုရင် ရေဆေးစရာမလို တစ်ခါထဲသန့်စင်ပေးနိုင်လို့ တကယ်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်။
ပိုက်ဆံအိတ်ကတော့ တော်တော်များများ ပါကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ အထဲမှာတော့ ပိုက်ဆံနဲ့ လိုအပ်တဲ့ bank cards, visiting cards, member cards အစရှိတာတွေတစ်စုတစ်စည်းထဲ ထည့်ထားနိုင်တာမို့ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ ကားစီးရင်းပဲဖြစ်ဖြစ် အလုပ်လုပ်နေရင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့ private အချိန်တွေကို အတော်လေးအထောက်အကူပြုစေမှာပါ။ 💃🏻🕺🏻
6. Portable battery charger and power bank
ဒါကတော့ အလွယ်တကူ ဖုန်းအားသွင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေမှာ အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒါလေးသာပါရင် တစ်နေ့တာ ဖုန်းအားကုန်ဖို့ သိပ်မပူရ တော့ဘူးပေါ့နော်။
7. Personal memory stick
ဒါကတော့ ကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီး အလုပ်တွေ data တွေကို အလွယ်တကူ stick ထဲထည့်သွင်းသိမ်းထားနိုင်တာဖြစ်လို့ တကယ်ကိုဆောင်ထားသင့်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုဆိုလဲမမှားပါဘူး။
မိုးရွာ နေပူတဲ့အချိန် အလွယ်တကူထုတ်ဆောင်းနိုင်တာမို့ ထီးလဲဆောင်ထားသင့်ပါတယ်နော်။ ခေါက်ထီးလေးဆို အလေးချိန်လဲသိပ်မရှိဘူး နေရာလဲသိပ်မယူဘူးလေ။ အေးဆေးပဲ 😁
ရေမွှေးကတော့ ကျွန်မရဲ့မပါမဖြစ်အရာတစ်ခုပါ။ တစ်နေကုန်အလုပ်လုပ်ပြီး ညနေဘက် date တွေဘာတွေရှိတဲ့အခါ emergency လိုအပ်လာရင် တကယ်ကို အသုံးဝင်စေပါတယ်။ ပြီးတော့ ရေမွှေးရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ပင်ပန်းနေချိန်မှာတောင် ရေမွှေးဆွတ်လိုက်ရင် စိတ်ကိုကြည်လင်စေပါတယ်နော်။
မိန်းကလေးတွေရဲ့အဓိကပြဿနာက ခေါင်းစည်းကြိုးလိုအပ်လာရင် အလွယ်တကူရှိမနေတာပါပဲ။ တခြားလူဆီကငှားရတာမျိုးတွေ မိန်းကလေးတိုင်းလုပ်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာတွေမရှိအောင် ခေါင်းစည်းကြိုးလေးလဲ မမေ့မလျှော့ဆောင်ထားကြပါလို့။ 😬
မိန်းကလေးတွေဆို အိတ်ထဲမှာ အနည်းဆုံး နှုတ်ခမ်းနီအရောင် နှစ်မျိုးလောက်ထည့်ထားသင့်ပါတယ်။ တစ်ခုကတော့ အနီရောင်ဖြစ်ပါစေနော် 😉
နှုတ်ခမ်းနီဆိုတာ တစ်နေကုန်လုံးခံဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ ဒါကြောင့်အရေးကြီးကိစ္စရှိလာရင် နှုတ်ခမ်းဖြူဖတ်ဖြူရော်ဖြစ်မနေဖို့ နှုတ်ခမ်းနီတော့ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်နော်။
12. Baby oil (or) Hand cream
လူတစ်ယောက်ဟာ များသောအားဖြင့် တစ်နေ့ကို ငါးကြိမ်ထက်မက လက်ဆေးကြပါတယ်။ လက်ဆေးပြီးတိုင်း လက်ရဲ့အရေပြားဟာခြောက်သွေ့တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်အရေပြားကို စိုပြေစေပြီး အသားအရည်ကြည်လင်စေဖို့ baby oil လေးတွေ hand cream လေးတွေ အသုံးပြုပေးသင့်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကိုတော်တော်များများက မလိုအပ်ဘူးလို့ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်ခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် တခြားနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် စာရေး စာဖတ် စသဖြင့်လက်ကိုပိုအသုံးပြုချိန်မှာ ကိုယ့်အသားအရည်ဟာ တခြားသူနဲ့ယှဉ်ချိန် မလှမပဖြစ်နေရင် ယုံကြည်မှုလျော့နည်းစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒါလေးလဲဆောင်ထားသင့်တဲ့အထဲ ပါတယ်နော်။
လက်သည်းခြေသည်း အလှအပကိုဂရုစိုက်တတ်တဲ့သူမျိုးသာမက လက်မှာ လက်သည်းစွယ်လေးရှိနေလို​ တစ်နေကုန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတဲ့အခါမျိုးတွေလဲ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အဲလိုအချိန်တွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ တံစဉ်းလေးလဲဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။
(photo by: www.flickr.com)
14. မုန့်၊ ပီကေ၊ Mint or gum
အိုခေ ဒါကတော့ အပျင်းပြေဝါးဖို့ ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။ တစ်နေကုန် တစ်ခုခုမဝါးနေရရင်တော့ အဲ့တစ်နေ့တာက တစ်ခုခုလိုအပ်သလိုခံစားနေရမှာပါ။ ပါးစပ်အနံ့ထွက်တာလဲ ကာကွယ်ပေးတယ်လေ။ 🤓
မိန်းကလေးတွေ လစဉ်ဓမ္မတာအရေးကြုံလာရင် အလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်အောင် pad တစ်ခုလောက် အိတ်ထဲဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။
ကဲ တော်တော်လေးလဲစုံသွားပြီ။ ဒါတွေအကုန်လုံးဆောင်ထားရမယ်တော့ မဟုတ်ပေမဲ့ တကယ်အသုံးဝင်တာမို့ ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်နော်။ အားလုံးကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ တစ်နေ့တာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။